Ita kuti vhiki rive nekutanga kwakanaka nezviitiko izvi pamitambo nemaapps | IPhone nhau
Ita kuti vhiki rive nekutanga kwakanaka nezviitiko izvi pamitambo nemaapp
Isu takatosiya kumashure kwevhiki, izvo zvinogara zvakapfupika, uye nhasi isu tinotanga svondo idzva rebasa uye zvisungo. Asi mazuva mashanu ebasa rechikoro ari pamberi pedu kusvikira tazogona kuti "Zvapera Chishanu!" zvichanyanya kutsungirira kana tikatanga vhiki iri patsoka yekurudyi, uye ndeipi nzira iri nani yekuzviita kupfuura nesarudzo ye mitambo uye maapplication aripo izvo zvinotibvumidza isu kuchengetedza mashoma mashoma.
Iwe unotoziva kuti zvese zvinopihwa uye kukwidziridzwa izvo zvatiri kuzokuratidza pazasi ndizvo Nguva Yakatemwa, in IPhone nhau Tinogona chete kuvimbisa kuti izvo zviripo zviripo panguva yekutsikisa ichi posvo, asi isu hatizive kuti zvichaguma riini nechikonzero chakareruka: vanogadzira havawanzo kuzivisa. Naizvozvo, kana iwe uchifarira chero ipi inotevera mitambo kana maapps, tora mukana wekupa uye kurodha pasi nekukurumidza sezvazvinogona. Ipapo iwe unenge uine nguva yekuchikoshesa uye, kana zvisiri izvo zvawanga uchitarisira, iwe unogona kugara uchidzosa uye kudzosera mari yako, dai yanga isiri yemahara. Totanga here?
1 Ace PhotoJus Chimiro Pro
3 Databit Nhare yekushandisa dhata 3G / 4G / LTE widget
4 OPlayer uye OPlayer HD
5 Rori diki rekudya
Ace PhotoJus Chimiro Pro
Ace PhotoJus Chimiro Pro ndeyekushandisa mifananidzo iyo inokutendera iwe wedzera anopfuura makumi mana mafuremu akasiyana kumifananidzo yako. Chinhu chakanakisa ndechekuti iwe unogona kuzviita panguva imwechete iwe unotora iyo pikicha, uye nekudaro uone kuti inotaridzika sei. Asi kunyange zvirinani ndezvekuti hazvizokubhadhare iwe peni.
Ace PhotoJus Chimiro Pro Iyo ine mutengo wenguva dzose we 2,99 euros, zvisinei ikozvino unogona kuiwana yemahara.
NaDraftPlus unogona gadzira mharidzo nekukurumidza uye nyore kubva kune yako iPhone kana iPad. Kune izvi, ine zvakawanda maficha uye mabasa senge kuisa matafura uye magirafu, kushanda munguva chaiyo nevamwe vanobatsirana, kuwedzera mifananidzo uye zvinyorwa kumapeji, kudhinda, kusarudza fomati uye font, kugovana nevamwe vanhu kuburikidza neemail. , kuomesa zvemukati uchishandisa iyo HTML standard, uye nezvimwe.
DraftPlus Iine mutengo wenguva dzose we2,99 euros, zvisinei ikozvino unogona kuitora kwechetatu chete kukosha kwayo, 0,99 euros.
Zvirongwa +9,99 €
Databit Nhare yekushandisa dhata 3G / 4G / LTE widget
Sezvaunogona kufungidzira kubva kuzita reapp, Databit chishandiso chinokutendera iwe ziva uye chengetedza nenzira yakapusa mashandisiro aunoita ako enhare yedhatas. Ingo vhura iyo app kana kuiwana kubva Widget yainopa kuti uone iyo iripo data mune chaiyo nguva. Pasina kupokana, rubatsiro rwakanaka kudzivirira njodzi dzekuwedzera.
Zviratidzo zvaro zvikuru zvinosanganisira:
Shandisa munguva chaiyo. Haufanire kudaidza mupi wako nguva dzese.
Widget. Yako yekushandisa dhata muNotification Center.
Zvaunoshandisa zvinotangazve pazuva raunodudza.
Mazuva ese, vhiki nevhiki uye pamwedzi.
Kuchengetedza. Chengetedza iyo programu nemaoko kana iwe uchida izvozvo.
Minimalist dhizaini isina kukugutsa iwe neruzivo.
Yakanaka kana iwe uchigovana internet kuburikidza neHotspot.
Apple Kuenderana kuenderana.
Inoshandira vese vanopa
Edzai LTE, 4G, 3G, uye Edge.
Databit Nhare yekushandisa 3G / 4G / LTE widget Iyo ine mutengo wenguva dzose we 1,99 euros, zvisinei ikozvino unogona kuiwana yemahara.
Databit: Dhata yekushandisa2,29 €
OPlayer uye OPlayer HD
OPlayer ndeye yemuno mutambi we iPhone ne iPad nerutsigiro rwemafomati akawanda. Unogona kuendesa mavhidhiyo kubva kuMac yako kana PC kuenda kuapp kuburikidza iTunes uye unakirwe neruzivo rwakakura.
OPlayer inotsigira yakanyatso fomati fomati, yakanyanya kugadzikana software, inonyanya kuita basa, uye iko kushandisa kuri nyore.
OPlayer Iyo ine maviri akazvimiririra vhezheni, kungave kweiyo iPhone kana iPad, ese ari maviri ane mutengo wenguva dzose we4,99 euros imwe neimwe, zvisinei, ikozvino unogona kuawana iwo ne80 muzana dhisikaundi ye0,99 euros yega yega.
OPlayer - vhidhiyo mutambi3,49 €
OPlayer HD - vhidhiyo inoridza5,49 €
Rori diki rekudya
Uye isu tinopera nemutambo wevadiki mumba. Mumutambo uyu wevakomana nevasikana vari pakati pemakore matanhatu kusvika masere ekuberekwa, vanofanirwa kumhanyisa rori diki rekudya uye, mushure mekusarudza mumwe wevabatsiri vana varipo, vanofanirwa kuve nechokwadi chekuti vanokwanisa kufudza vatengi vane nzara madonati, imbwa dzinopisa, waffles. , mapapiro ehuku ...
Chidiki Chikafu Rori Iyo ine mutengo wenguva dzose we 2,99 euros, zvisinei ikozvino unogona kuiwana yemahara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Ita kuti vhiki rive nekutanga kwakanaka nezviitiko izvi pamitambo nemaapp
Foxconn inogovera mudenga pane zvinotarisirwa ne iPhone 8
Sydney Apple Chitoro chakadzingwa nekuda kwekutyisidzira kwebhomba